ဘတ်ဂျက် Friendly ဒူဘိုင်းမှတစ်ဦးကခရီးသွားဧည့်မယ့်လမ်းညွှန် - ယူအေအီးသွားရောက်!
Budget-Friendly Dubai သို့ခရီးသွား tourist ည့်လမ်းညွှန်
သင်သည်ဤမှဖူးကြပြီမဟုတ်တဲ့အခါမှာဘတ်ဂျက် Friendly ဒူဘိုင်းမှတစ်ဦးကခရီးသွားဧည့်မယ့်လမ်းညွှန်, 2020 အတွက်ဒူဘိုင်း၏နေသာမြို့။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်တူးခြင်းမရှိဘဲမြို့ Vibe တွေ့ကြုံခံစားချင်, ထို့နောက်သင်တို့သည်ဤဘတ်ဂျက်-ဖော်ရွေ skip နှင့်တစ်ကြိမ်မဟုတ်ရပါမည် တစ်သက်တာအတှေ့အကွုံအတွက်.
ဒူဘိုင်းကမ်းလှမ်းမှုကိုမှစာရေးတံနှင့်စာရေးရှိပါတယ် သငျသညျစွန့်စားမှုအပေါ်မြင့်ရှိမရှိအစားအစာ, ဝိုင်, ဒါမှမဟုတ်ဂီတနှင့်သဘာဝတစ်ဦးကိုနှစ်သက်ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်ပဲလိုခငျြ၏, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူ အခြို့သောဘဝအတှေ့အကွုံအဘို့သင်၏သားသမီးယူ အစွမ်းကုန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု & တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အတူ။ ရုံတစ်ခုခုဆန္ဒရှိ & မြို့အသင်တို့အဘို့ပြုလုပ်ရှိပါတယ်!
အကြှနျုပျ၏ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည် / အတွေ့အကြုံများအကြံပြုချက်များ are here:
1 ။ အဆိုပါသဲကန္တာရ Safari က & သဲခုံ Bash
ဒီနေရာတွင်ကုလားအုပ်စီး, သဲခုံမြားတှငျ Land Cruiser ကားအတွက်စွန့်စားစီး, ထမင်းစားခန်းရှိရဲ့ ... ရွှေသဲကျင်းပနေများ၏ရိုးရာအာရပ်လမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစား ဗေီစတိုင်အတွေ့အကြုံ ရတနာ, မီးကခုန် & tanoura ကခုန်ပွဲများနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ဝမ်းကခုန်, အာရဟင်္တက်တူး, အာရဗီဝတ်စုံများ in ဓာတ်ပုံ session တစ်ခုနှင့်အတူ Majlis ။ တချို့ကကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်းသဲဘော်ဒါတို့ပါဝင်သည် (သို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ကြဉ်းနိုငျသညျ), Quad စက်ဘီးစတာတွေ
အဆင်ပြေအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်, နေရာလေးကိုအလင်း woollens အစုတခုစောင့်ရှောက်
မြင့်မားတဲ့ SPF & ရိပ်ကောင်းတစ်ဦးတစ်စုံတစ်လျှောက်သယ်ဆောင်
ညဦးယံအချိန်အားဖြင့်ဘူဖေးစတင်အဖြစ်လုံလောက်အောင်ရေပုလင်း & မုသယ်။
ကုန်ကျစရိတ်: လက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုသင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အထုပ်စာအုပ်ဆိုင်အဆိုပါခရီးစဉ်ကုမ္ပဏီပေါ် မူတည်. လူတစ်ဦးနှုန်း AED 70 မှလူတစ်ဦးနှုန်း AED 250 ခြားနားသည်။
2 ။ အဆိုပါဘုနျးကွီး Burj Khalifa, ဒူဘိုင်းစမ်းရေတွင်း & ဒူဘိုင်း Mall ကသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဒူဘိုင်း၏စဉ်းစားပါ & သင်တို့သည်ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားလက်လွတ်လို့မရပါဘူး။ အရှည်ဆုံး, အလှဆုံး & ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး။
သငျသညျအထွဋ်၏ကြောက်တယ်င် & ဒီအင်ဂျင်နီယာအံ့ဩ၏ဂုဏ်အသရေတွေရဲ့ရန်အပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုလျှင်, သငျသညျဒူဘိုင်း Mall ကသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် & ဂီတစမ်းရေတွင်း၌ပြသတိုင်းတစ်ဝက်နာရီစဉ်အခါ, အမြင့်ဆုံးမျှော်စင်ပေါ်တွင်လေဆာအလင်း display ကိုတစ်ဦးအချိန်ဇယားရှိပြီး, အ Burj Khalifa ပေါ်စမ်းရေ & လေဆာအလင်း display ကို watch, ကြိုတင်သူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာစစ်ဆေးသူတို့ကိုတစ်ဦးပါပေးပါ။
သငျသညျ Burj Khalifa ခရီးစဉ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ။
အဆင်ပြေဖိနပ်ဝတ်ဆင်, ဘီးတပ်ကုလားထိုင်အကူအညီတစ်ခု option ကိုရှိပါတယ်။
သင်အမှန်တကယ်သိရန်လိုပါလျှင် ပေါ်မှာဖြစ်တူခံစားရပုံကို ကမ္ဘာ၏ထိပ်တန်း, စာသား, ထို့နောက် Burj Khalifa ၏ထိပ်တန်းမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လက်လွတ်မပါဘူး။
packages လူတစ်ဦးနှုန်း AED 150 ကနေ start & နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့၏ website ကိုသူ့ဟာသူအများအပြား combo packages များရှိပါတယ်။
3 ။ အဆိုပါ Global ကျေးရွာ
ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကိုအတူတကွလာရာအရပ်, သင်အရှိဆုံးအဆောက်အဦးများနှင့်အများအပြားနိုင်ငံများအထိမ်းအမှတဆည်းကပ်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့်နေရာတစ်နေရာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, သင်ကသူတို့ရိုးရာအနုပညာဖျော်ဖြေပွဲသက်သေခံနိုငျသညျ, သငျသညျအကွောငျးကိုဝါကွှားနိုင်သောအစားအစာ & လက်ရာလက် သင့်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများမှ။ သင်လူတစ်ဦးအတွက်အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာလာရောက်လည်ပတ်အကြောင်းကိုဝါကြွားလျှင်ပင်, လူတွေကလဲကျအံ့သောငှါ, ဤမျှလောက်သိရန်ရထိုလူမျိုး၏ pavillions သွားရောက်လည်ပတ်။
အဲဒီမှာသူတို့အမှတ်တရပစ္စည်းများ, နံ့သာမျိုး, ရိုးရာဆင်မြန်း, အစားအစာ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရှိသည်မဟုတ်။ ဒီမမေ့နိုင်သောအပေါ် Go တစ်ချိန်ကဒူဘိုင်းအတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်.
ထိုအရပ်ကိုကြီးမားဖြစ်ပါတယ် &4နာရီနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဟာနေ့တိုင်း (အောက်တိုဘာဧပြီလ)4သန်းခေါင်မှီတိုင်အောင် 12 pm တွင်ဖွင့်လှစ် & တိုင်းဖြတ်သန်းနာရီ & လမ်းများကုိုကြည့်ရနှင့်အတူစည်ကားလာတယ်, ဒါကြောင့်အညီစီစဉ်။
သငျသညျအကြီးတန်းနိုင်ငံသားများအဘို့အသက်ကြီးရွယ်အိုများအဖြစ်အခမဲ့ entry ကိုများအတွက်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်အကူအညီရနိုင်။
(သင်သေးငယ်တဲ့ကလေးတွေရှိသည်ဆိုပါက) ကအဖြစ်ကောင်းစွာအထဲမှာရရှိနိုင်မယ့်သော်လည်းအလုံအလောက်ရေ & မုသယ်ဆောင်
အဆင်ပြေဖိနပ်ဝတ်ဆင် & ချွေးထွက်သယ်ဆောင်
ကုန်ကျစရိတ်: လူတစ်ဦးနှုန်း 15 AED,3& အကြီးတန်းနိုင်ငံသားများနှစ်အောက်ကလေးများအခမဲ့သွားပါ
4 ။ ရွှေ & Spice Souk, အယ်လ် Seef ကျေးရွာ, ဟောငျးဒူဘိုင်း & DHOW ခရုဇ်မှာ Bedazzled Get
အလည်အပတ် Bur ဒူဘိုင်း နှင့် Deira, သငျသညျအဟောင်းများကိုကြိမ် & ၏ခံစားမှုရလိမ့်မယ် အိန္ဒိယကိုဖွင့်စျေးကွက်အနည်းငယ်ခံစားမှု အထူးသဖြင့် Meenabazar ဧရိယာထဲမှာ။ ဒီနေရာတွင်သင်မကြာခဏ "ကိုကြိုက်ရမထားတဲ့နံ့သာမျိုးကိုတချို့၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံရလိမ့်မယ်Zatar"။ ယူအေအီး၌ရောင်းရွှေအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, သင်တစ်ဦးသည်အိန္ဒိယလျှင်, သင်သည်ဤအဖိုးတန်သတ္တုကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးကိုသိကြရမယ် ... သို့သော်ဤနေရာတွင်သင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မယ် သငျသညျရှေ့တျော၌တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူးဒီဇိုင်းများ.
အဆိုပါ Abara ဆိပ်ကမ်းဆီအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါကမြို့အတွင်းသွားလာပျော်စရာင် အဟောင်းနှင့်ဒူဘိုင်း၏သစ်ကိုကမ္ဘာစောင့်ကြည့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်။
အယ်လ် seef ကျေးရွာ၌, စားသောက်ဆိုင်ဟောငျး Arabic အဘိဓါန်ကျေးရွာစတိုင် & ဤအရပ်ဌာန၌အိမ်တွင်းလွဲချော်ခံရဖို့ပဲဒါကြောင့်လှပလိုပဲကဒေလီရဲ့ Khau Gully တဦးသတိပေးပါလိမ့်မယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ် ...
ကုန်ကျစရိတ်: Dhow ခရုဇ်သင်ရွေးချယ်တအပေါ်သို့မူတည်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် AED 70 ထံမှစတင်သည်။ သငျသညျထဲမှာကျင်လည်ကျက်နိုင်ပါတယ် Abara စက်လှေ (သာ AED 1) သို့မဟုတ် Marina (AED 20) မှတစ်ဦးရေတက္ကစီ (AED 50) သို့မဟုတ်ရေကူးတို့စီးယူပါ။ အဆိုပါမြင်ကွင်းကိုအံ့မခန်းဖြစ်ပါတယ်။
5 ။ Atlantis အဆိုပါအုန်း, အုန်း Jumeirah ကျွန်း
ယင်း တဖန်တစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာအံ့သြစရာ & အကြီးဆုံးလူလုပ်ကျွန်းများ။ အဆိုပါကမ္ဘာကျော်နာမည်ကြီးတွေတချို့၏ဤရွေ့ကားအသိုက်နေအိမ်များလည်း။ Atlantis ဟိုတယ်က၎င်း၏ရေပန်းခြံအဘို့, ပျောက်အခန်းများစသည်တို့ကို, သွားရောက်လည်ပတ်ရန်တဦးတည်းလှပသောဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်
မဟုတ်ရင်, စွန်ပလွံပုံသဏ္ဍာန် (လူတစ်ဦးနှုန်းပြန်လာလက်မှတ်များအတွက် AED 20) ၏ခမ်းနားအမြင်ရတစ်လိုင်းပြေးရထားပေါ်တွင်ဘုတ်အဖွဲ့မှ သင်တစ်ဦးတက္ကစီပေါ်တက်နိုင်ပါတယ်သငျသညျလူများ၏ကြီးမားတဲ့အုပ်စုတစ်စုကနေ & အထူးသဖြင့်လျှင်အများကြီးဖြုန်းချင်ကြပါဘူး။
ဤသူကား ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး & အလှဆုံးပန်းပွင့်ဥယျာဉ်တော်, တဦးတည်းဒါကောင်းစွာဒါခေါ်မိုးနည်းရေရှားတိုင်းပြည်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာထိန်းသိမ်းထားဤမျှလောက်များစွာသောအပင်စိတ်ကူးမပေးနိုငျသညျ, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့စသည်တို့ကိုမတ်ေတာ, လေကြောင်း, ကို Mickey ၏တစ်နှစ်ကဲ့သို့သောအထူးအလှဆင် & ပန်းပုဆောင်ပုဒ်များ
ကုန်ကျစရိတ်: AED 50per လူတစ်ဦး, 12 နှစ်ပေါင်း 40 AED အထက်ကလေးများ။
7 ။ အဆိုပါ Jumeirah သဲသောင်ပြင် Corniche
သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်၏ရုပ်ပုံမပါဘဲပြည့်စုံသည်မဟုတ် Burj Al Arab အဆိုပါနောက်ခံ၌တည်၏။ သူတို့ကစင်ကြယ်သောသဲ, လာပြီးအတူတူနေနေကြပါတယ်, မှတပါးစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ, လမ်းလျှောက် & စက်ဘီးစီးပုဒ်, ကောင်းမွန်သောအိမ်သာအဆောက်အနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်, သဲတစ်ပြင်လုံးကိုအများကြီးမပေးရရှိပါသည်။
8 ။ ပွဲတော်စီးတီး Mall မှာပြသမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
၎င်း၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး, Guniess စာအုပ်စံချိန်တင်ရေစီမံကိန်းကိုလေဆာအနိုင်ရတဲ့။ 30 စမ်းရေနဲ့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ, ပရိသတ်တွေနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့သံကိုဝန်းရံတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးကဲ့သို့သောပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြီးမားပါ!.
ကုန်ကျစရိတ်၏အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြပွဲ 6.30 pm တွင်မှီတိုင်အောင်အလုပ်ချိန်နာရီကြားကာလမှာ 10.30 pm တွင်စတင်သည်
9 ။ ဒူဘိုင်း Frame က
ကမ်ဘာပျေါတှငျသျောလညျးတဖနျ, အကြီးဆုံးဘောင်တစ်ခုလှလှပပဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောအရပ်။ တစ်ခုမှာမျှော်စင် အရာဒူဘိုင်း၏အတိတ်ပြသ တစ်ဦး virtual reality သင်သည်ရှိပြီးအခြား, ဤအရပ်မှထွက်အတွင်း၌လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်.
ကုန်ကျစရိတ်: 50 နှစ်အောက်ကလေးများအခမဲ့သွားရစဉ်လူကြီးများအတွက် AED 5, မိသားစုတချို့ 'passes, ရှိပါတယ်။
10 ။ ဒူဘိုင်း Glow ဥယျာဉ်
ဒါကနေဝင်ချိန်ပြီးနောက်သွားရောက်ကြည့်ရှုခံရဖို့နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည်, သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့နေရာ ကလေးများနှင့်အတူ က ပို. ပင်ပျော်စရာစေသည်။ ဒါကဒိုင်နိုဆောတန်းတူ, ရေရှည်တည်တံ့ပန်းခြံ & ရေခဲပြင်ပန်းခြံ (ကသီးခြားလက်မှတ်ရှိပါတယ်) ဒါပေမယ့်အားလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်စရာအပြည့်ဖြည်အတွေ့အကြုံကိုပါဝင်သည်။
အောက်တိုဘာလအတွင်းဖွင့်လှစ် & မေလကုန်တွင်မရောက်မှီတိုင်အောင်, ပွင့်လင်းဖြစ်နေဆဲ, AED 65 (3 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကလေးများအခမဲ့သွားပါ) ကုန်ကျသည်။